HOOS-U-DHACA QOLKA AABAHA: SHARAXAADDA HABABKA - BEERAHA DIGAAGA
Qof kastaa wuxuu u maleynayaa in dhisey dhismaha laftiisa oo dhan, laakiin maaha sidaas, weli waa lagama maarmaan in si habboon loo qalabeeyo qalabka lagama maarmaanka ah. Waxaa laga yaabaa in aad u maleyneyso in wax dhibaato ah aysan jirin, laakiin in la dhiso dabaqyo, hudheello, si ay u sameeyaan iftiin iyo hawo.
Haddii aad sameyso wax kasta oo khaldan ama wax ka maqan, markaa shimbirahaagu waxay joojin karaan daadinta, taas oo aan fiicneyn.
Guriga shimbirta waa in la qalabeeyaa, isagoo tixgelinaya qodobo badan: iftiin habboon, nalalka hawada iyo wareegga hawada ee qolka, meeleynta saxda ah ee quudinta, bowdada biyaha, hudheellada, iyo wixii la mid ah. Si arrintan loo sameeyo, waxaad baran kartaa sida loo qalabeeyo beeraha digaaga, si aad wax kasta u saxdo digaaga digaaga, iyo si aad u bixiso shimbiraha raaxada ugu badan.
Waa maxay dabeelaha guriga hargabka?
Asal ahaan, dhammaan milkiilayaasha ku leh cagaarka digaagga ee degaanka waxay og yihiin in ay jirto hawo fiican, laakiin dhammaantood ma yaqaanaan sida saxda ah. Waxaa jira noocyo badan oo hawo leh oo loo isticmaali karo in lagu qalabeeyo guri.
Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo sameeyo hawo-qaadid guriga hoyga ah:
Habka ugu fudud ee nooca hawo-qaadashada waa inuu qalabka daaqa ka samaysto guriga, laakiin ha u oggolaanin in uu qolka ku dhexjiro.
Goobta ugu fiican ee daaqada waxay ka sarreysaa albaabka, taas oo ah, hawo qabow ku imanaysa albaabka, oo diirrannaaya daaqada.
Habka labaad waa mid aad u adag. Wuxuu ka kooban yahay laba god oo saqafka digaagga, kaas oo laba tubbo lagu dhajiyo, mid yar iyo mid kale oo yar.
Habkani wuxuu ku haboon yahay hawo-qaboobaha xilliga qaboobaha.
Habka seddexaad waa in lagu rakibo hababka hawo-qaadashada. Laakiin waa ku haboon tahay qalabka beeraha digaaga iyo guryaha digaaga ee waaweyn.
Mulkiilayaasha badankooda caleenta digaaga ma si buuxda u fahmayaan sababta ay udub-dhexaadka guriga looga baahan yahay. Si arrintan loo sameeyo, waxaynu ku siin doonaa tusaalooyin dhowr ah si aan uga jawaabno su'aalahaaga ku saabsan ujeedada hawo-qaadashada ee coop digaaga.
Marka ay hawo cusub u soo gasho guriga, waxay ka saartaa uumi-biyoodka ammonia ee qolka.
Labadani waxay ku badan yihiin coop kasta oo digaag ah, oo kaliya ma aha inay qaataan ur xun, sidaas darteed waxay halis u yihiin digaaga (shimbirta waa la sumeyn karaa). Maxaa saameyn kara luminta wax soo saarka ukunta, cudurka digaaga, iyo mararka qaarkood necrosis.
Marka ay joogaan hawo-qaadidda qolka, waxay bixisaa ilaalinta heerkulka hawada ee heerkulka wanaagsan ee guriga hen.
Qof kastaa wuu ogyahay in heerkulka sare uu si xun u saameeyo caafimaadka shimbirta, gaar ahaan xilliga xagaaga, habka hawadu waa mid aad u muhiim ah si loo hubiyo wareegga hawada ee qolka.
Sidoo kale, iyadoo la adeegsanaayo hababka hawo-qaadashada ee digaagga digaaga ayaa bixiya qoyaan fiican. Haddii coop aad u qoyan ama aad u qallalan, digaagga ayaa dareemi doona raaxo la'aan. Tilmaamaha ugu fiicnaanta ee qoyaanku waxay ku jiri doonaan tirada 59-79%.
Xilliga xagaaga, cadka digaaggu waa mid aad u cufan, sidaas awgeed heerkulka hawada waxaa lagu hagaajin karaa isticmaalka hawo-qaadista.
Shuruudaha hawo-qaadashada ee hoyga
Waxaan liiska ku qornaa shuruudaha aasaasiga ah ee habka hawada digaag digaag:
Shuruudaha ugu horeeya waa in la hubiyo bixinta hawo nadiif ah oo nadiif ah dhismaha coop digaaga. Tirooyin badan oo shimbiraha ah ee coop ku baabbi'iyo badan oo hawada, iyo qaado meelo badan oo, shimbiraha ayaa maro.
Qiyaasta celcelis ahaan, shan shimbir ayaa loo qoondeeyey hal mitir oo laba jibbaaran.
Xaaladda labaad ee loo baahan yahay in la tixgeliyo waa in hawada ku jirta gawaarida digaaga, ay ka soo baxdo waddada. Haddii socodka hawadu dhaco xilliga qaboobaha ee sanadka, markaa heerkulka hawada qolka ayaa hoos u dhacda, taas oo si xun u saamayn karta caafimaadka digaaga.
Intaa waxaa dheer, shimbir waa mid aad u nugul qoraalada. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh uga fekerto habka hawada ee guriga hargabka.
Khabiirada goobtan waxay ku talinayaan in lagu rakibo hawo-qaboojiye hawo leh furfurnaan yar oo ku taal cadka digaaga, taas oo si weyn u yareeyn doonta luminta kuleylka iyada oo hawada cusubi ay dhaafi doonto.
Xaaladda saddexaad ee jiritaanka hawo nadiif ah ee hoyga hen waa nadiifinta joogto ah ee qashin.
Sidoo kale, biyaha qubeyska ah ama cuntada la dhufto ayaa qolka ku abuuri karta ur xun. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la raaco tan.
Xaaladda afaraad waa muhiim. Qolka qolka digaagga waa in had iyo jeer la nadiifiyaa lana hagaajiyaa. Gaar ahaan nadaafadda ayaa loo baahan yahay in la siiyo fiiro gaar ah, sababtoo ah jiirka yar ee kala duwan ayaa furi kara, taas oo keeni doonta raaxo u leh shimbiraha iyagoo joogitaankooda iyo hawada wasakheeya.
Xaaladda shanta sano si loo go'aamiyo in aad wax kasta oo sax ah ku samaysay hawo-qaadashada, waxaad u baahan tahay inaad joogtid qolka digaaga digaagga muddo cayiman. Haddii aad dareento madax xanuun ama hawo la'aan, markaa wax qalad ah iyo habka hawadu u baahan tahay in dib loo noqdo.
Waa maxay noocyada hawo-qaadashada ee jira hannaanka guriga hen?
Ka dib markii aan kuu sheegnay baahida loo qabo hawo qaadashada digaaga digaaga iyo shuruudaha loogu talagalay, waa wakhti ay ka hadlaan noocyada hawo-qaadashada.
Waxaa jira saddex nooc oo hawo-qaadid ah: hawo dabiici ah, hawo-hawo qallalan iyo qalab farsamo. Waxaan ka sheekeyn doonaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Tilmaamaha ugu weyn ee hawo dabiiciga ah
Qalabka nadaamka dabaysha dabiiciga ah ee qolka waxaa loo isticmaalaa guryaha digaaga oo yar, taas oo ay jiri doonto tiro yar oo shimbir ah. Nidaamka hawo-qaadashada waxaa lagu bixiyaa albaab furan ama dariishado furan, haddii ay jiraan. Laakiin sidaasi in aysan jirin wax qabyo ah qolka.
Si aan dabayshu u socon qolka, waxaa lagama maarmaan ah in daaqadaha si sax ah loo sameeyo. Nidaamka ugu fiican ee daaqadaha ayaa ka sareeya albaabka digaaga digaag, laakiin waxaad diyaari kartaa daaqada iyo hoostiisa. Maxay u fiicantahay hawo cusub qolka iyo qorraxda.
Habka dabiiciga ah ee hawada ayaa ugu wanaagsan loo isticmaali karaa xilliga kulaylaha, marka albaabada iyo daaqadaha coop digaaga ay furan karaan wakhti kasta. Intaa waxaa dheer, habkan ayaa u baahan in si joogto ah loola socodsiiyo qofka.
Nidaamkan noocan ah waxaa lagu fuliyaa heerarka hawada labadaba gudaha gudaha coop iyo dibedda, xawaaraha dabaysha, cadaadiska hawada, iyo sidoo kale xuduudaha kale ee hawada.
Si aad u fuushid hawo-gashigan guriga hoyku ma noqon doonto goob shaqo, waxa ugu muhiimsan waa in uu shaqeeyo, wuxuu bixiyaa hawo cusub oo hawada ka baxa, iyada oo aan abuurin dabayl xoog badan.
Wixii waxtarka weyn ee hufnaanta noocan ah daaqada waxaa lagu dhejin karaa mandheer ama xirmosidaas awgeed mararka qaar waxaad xiran kartaa ama furi kartaa daaqada.
Waxaa laga yaabaa in la barbardhigo noocyada kale ee hawo-qaadashada, nidaamkani ma aha mid aad u fiican oo guud ahaan wuxuu u baahan yahay kormeer joogto ah. Laakiin way ka fiicnaan laheyd in hawada noocan oo kale ah laga helo. Gaar ahaan shimbiraha ayaa aad u jecel nalka iftiinka daaqada.
Waa maxay sifooyinka wanaagsan iyo kuwa xunba wareegga dabiiciga ah ee hawada ee hoyga, waxaan hoos ku taxanahay:
Waxaa intaa dheer, hawo dabiici ah oo dabiiciga ah waa sahlan tahay in la isticmaalo iyo qalabkeeda.
Si aad u rakibtid habkan hawo-qaadashada, uma baahnid inaad kharashka ku bixiso qalab kasta, iyo habka rakibida daaqada hawada uma baahna raacitaanka tilmaamaha adag.
Waxaa sidoo kale jira saameyn taban oo loogu talagalay hawo noocan oo kale ah.
Dhibaatada ugu weyn waa saameynta cimilada hawada, taas oo ah, tusaale ahaan, xilliga xagaaga kuleylka hawada ee digaagga digaaga iyo waddada ayaa noqon doonta isku mid, ama waddada ayaa noqon doonta wax ka badan. Xitaa habka hawo-qaadashada noocan oo kale ah ayaa si weyn u saameeya xaaladaha cimilada sida xawaaraha dabaysha, jihada dabaysha iyo kuwa kale.
Waa maxay nidaamka hawo bixinta iyo qiiqa. Iyo sida loo sameeyo naftaada
Gawaarida hawada ee qasabka ah waa hab ku habboon oo hawada u wareegaysa hawada guriga marka loo eego habka dabiiciga ah. Inkasta oo calaamadaha qaarkood ay isku mid yihiin.
Nidaamkan wareegga hawada ee hoyga waa mid aad u wanaagsan isticmaalka xilliga dayrta-xilliga qaboobaha. Maareynta hawo bixinta iyo hawada ayaa ah midka ugu sahlan oo sahlan isticmaalka.
Si loo rakibo hawo-qaadashada noocan ah, waxaad u baahan doontaa tuubooyin laba mitir dheer iyo laba boqol milimitir oo dhexroor ah. Si aad u dhigto coop digaag yar wuxuu noqon doonaa mid ku filan in la isticmaalo laba dhuumo. Mid ka mid ah, kaas oo, wuxuu fulin doonaa hawsha nadiifinta hawada cusub ee guriga, tan labaadna waxay xaqiijin doontaa in hawada qulqulka hawada laga saaro.
Hadda waxaan tixgelin doonaa dhammaan marxaladaha dhismaha nadaafada hawada iyo hawada hawada hawada ee dufanka digaaga, iyada oo gacmahayagu ay tahay:
Waxa ugu horreeya ee loo baahan yahay in la sameeyo waa laba godood oo saqafka digaagga ah, waxaanu ka dhigi doonaa godad sida ay udhaxeyso tubbada.
Xulashada ugu fiican waxay noqon kartaa haddii aad tuubada ka soo saarto hawada loo isticmaalo, korka dusheeda, iyo tuubada hawada cusubi ay ku imaan doonto jihada ka soo horjeeda, taas oo ah, ka sii fogaanta qiiqa, ka sii fiican.
Waxaan sii wadi doonnaa isku xidhka tubada qiiqa.
Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo si loo dhammeeyo tuubadan kan wareegga hawada ee qolka wuxuu ahaa hal mitir iyo badh ka sarreeya. Laga soo bilaabo kaas oo soo socota in in guriga hen waa in ay ku jiraan qayb yar oo tuubada, meel 20-25 centimeters.
Ka dib markaad dejisid tuubada kuleylka ah, sii wad biyaha ku dhejiska. Waa inay jirtaa. Xagga sare ee saqafka waa inuu ahaado 30 sentimitir, laakiin qolka intiisa badan.
Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in qiyaastii 25 sentimitir oo qasacadaysan tahay in la sii wado dabaqa.
Si ay roobabku u dhacaan tuubada, ka dibna digaagga digaagga, waxaa lagama maarmaan ah in la dhajiyo tuubooyinka qaab muuqaal ah "G". Laakiin sidoo kale ma sameyn kartid caynkaas oo kale, laakin waxaad ku daadi kartaa dalladaha mid walba.
Intii lagu gudajirayo hawo-qaadashada noocan ah ee tuubooyinku waxay samayn karaan godad yar, sidaas darteed tuubooyinka ayaa u baahan doona in la beddelo. Laakiin si looga fogaado tan, waa lagama maarmaan in la dhiso tuubooyinka. Marka ugu horeysa si aad u macaan, ka dibna rinjiga.
Inta lagu jiro mudada aad bilaabeyso inaad ku rakibtid tuubooyinka saqafka, saqafka ama derbiyada digaagga digaaga, dildilaaca ayaa si khalad ah u sameysan kara. Khabiiradu waxay kugula talinayaan sameynta dildilaasyada, iyaga oo ku dhejiya boorso, sababtoo ah hawlgalka habboon ee hawo-qaadashada qolka ayaa si xun u sii xumaan kara.
Dhamaadka tuubooyinka qalabka, waxaad u baahan tahay inaad hubiso kalsoonidooda ah xakamaynta. Haddii aan si fiican loo go'aamin, markaa waxaa lagu lifaaqi karaa saqafyada.
Hooska hawada noocan ah waa joogitaanka tuubooyinka qolka coop.
Taasi waa wax kasta oo ah habka hawo-marinta hawada. Laakiin haddii aad ku nooshahay cimilada oo leh qaboobooyin adag, ka dibna waxaad ku hagaajin kartaa shoolada tuubooyinka, ama waxaad ku dabooli kartaa maro haddii loo baahdo.
Waa maxay hawo farsamo ee hawada ee hoyga hen
Qalabka hawo mareenka ah ayaa marar dhif ah loo isticmaalaa kambiyuutarrada digaagga.
Awoodda ugu weyn ee aan la fahmin, hawo-qaadashada noocan ahi waa isticmaalka badan ee tamarta korantada.
Sidaa darteed, haddii aad shimbiraha koraan oo kaliya isticmaalkaaga gaarka ah, kharashaadkaagu ma awoodi doono inaad bixiso. Laakiin tani maaha mid aad muhiim u ah, haddii aad awood u leedahay in aad sameyso hawo dabiici ah oo caadi ah oo gacmahaaga ah, markaa waxay si fiican ula qabsan doontaa qaadista hawada xun iyo hawo nadiif ah, iyo sidoo kale qaadista qiiqa xun iyo qoyaan badan.
Noocida noocan ah oo loo isticmaalo meelo waaweynHalkaas oo koraan tiro badan oo shimbiro ah.
Nidaamka noocan oo kale ah wuxuu caadi u yahay beeraha digaaga, shirkadaha waaweyn, iyo wixii la mid ah. Nidaamkan hawo-qaadashada wuxuu la mid yahay habka loo isticmaalo iyo qiiqa, laakiin keliya isticmaalka tiknoolajiyada horumarsan.
Tiknoolajiyadaani waxay ka kooban yihiin isticmaalka taageerayaasha wareegga hawada. Waxay u soo jeesteen iyagoo banaanbaxaya iyagoo gacan ka geysanaya xakamaynta kontoroolka ama waxay si toos ah ugu shaqayn karaan.
Laakiin haddii aad rabto in aad shimbiraha shimbiraha, rakibidda nooc kasta oo hawo ah waa qeyb muhiim ah. Iyo habka lagu rakibo hawo-qaadashada ma qaadanayso waqti badan iyo shaqaale.
Qalabka farsamaysan wuxuu ka kooban yahay laba tubo iyo fan ah, laakiin meesha ay ku yaalaan waxay ku xiran tahay nooca wareegga wareegga:
Raadinta wareegga. Haddii masraxa lagu rakibo tuubada qubeyska.
Wareegga wareegga. Haddii masraxa lagu rakibo tuubada qiiqa.
Astaamaha wanaagsan iyo kuwa xun wareegga wareegga hawada:
Dabcan, qaabkan hawo-qaadashada ayaa noqon doona wax soo saar badan marka loo eego kor ku xusan. Laakiin waa inaad bixisaa raaxada.
Marka aad rakibaysid nooca hawo noocyadan, waxaad u baahan tahay inaad iibsato tuubooyin kaliya, laakiin sidoo kale taageere, fiilooyin ku xiran xadhkaha korontada, furaha iyo waxyaabaha kale ee yaryar.
Laakiin sidoo kale waa lagama maarmaan in la illoobo in haddii korontada aan la keenin coop digaag, tani waxay keenaysaa kharash dheeraad ah.
Hase yeeshe, inkastoo ay jirto arrin culus, waxaa jira dhinaca wanaagsan ee noocan ah hawo hawo noocan ah. Fududayntu kuma xirnaato cimilada, xilli-ciyaareedka, iyo waxyaabo kale.
Waa maxay habka loo dhiso qalabka nidaamka hawo-mareenka
Hannaankani wuxuu ka bilaabmaa rakibaadda laba tubo. Tani waxaa loo sameeyaa si la mid ah nidaamka iyo nidaamka diillinta. Laakiin dhinaca hoose ee tubada dhamaadka waxaa lagama maarmaan ah in la daadiyo dhawr meelood oo ay ka soo baxaan kondhiyan. Sidan, wareegga waa laga hortagi karaa.
Marxaladda soo socota ee rakibidda waa in korontada la geeyo meesha ay maskaxda lafteedu ku taallo. Marxaladdan, waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaarto meesha uu isbedelayo.
Badanaa waxa loo isticmaalaa laba ikhtiyaar oo ah goobta:
Hal wareeg ayaa sameeya hawsha iftiinka iftiinka iyo soo saarista hawada.
Ama isticmaal badhanka laba-badhan. Marka ugu horeysa iftiinka, tan labaad ee daboolka.
Iyo waxa ugu dambeeyey ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad ku rakibto fanaha laftiisa, tuubada la rabo. Taasina waxay kudhacaysaa dhammaan geeddi-socodka hawo-mareenada farsamada.